जंगली जनावरका कारण खेतबारी बाझै राख्नु पर्ने अवस्था अाउन थाल्याे | News Nepal
अछाम, ६ चैत । जंगली जनाबरले खेतबारीमा लगाएको अन्नबाली र तरकारी बाली खाएर नष्ट गर्न थालेपछि स्थानीयवासी चिन्तित बनेका छन् ।
जंगली जनावरका कारण खेतबारी बाझै राख्नुपर्ने अवस्था आउन थालेको साफेबगर नगरपालिका–१० घुघुरकोटका स्थानीय कुलराज भट्टले बताउनुभयो । “एक हजारको बथानमा आउने बाँदरको समूहले गहुँबाली खाइसक्यो उहाँले दुःखेसो पोख्नुभयो—“आफूले खान नपाएपछि किन बाँदर र बँदेलको लागि खेती लगाउनु ? दःुख गरेजति उत्पादन हँुदैन त्यसमा पनि जंगली जनाबरले खाएर हैरान पारेको छ ।” सबै काम छोडेर बाँदर भगाउने काममा जुटेका छन् स्थानीयवासी ।
बान्नीगढ जयगढ गाउँपालिका–१ गाज्राका नरबहादुर खड्का पनि बँदेलदेखि हैरान हुनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो– “बँदेलले गाउँलेले बारीमा लगाएको गहुँ र तरकारी एउटा पनि राखेन । एक त समयमै पानी नपर्नाले हामीले मार खेप्नु परेको छ भने अर्काेतिर दःुख गरेर लगाएको खेतीसमेत बँदेलले आएर खान थाल्यो ।” साफेबगर नगरपालिका– ३ कि मंगलादेवी कुँवरले बँदेल भगाउन रातभरी जाग्राराम बस्दा पनि बारीमा लगाएको मकै जोगाउन सक्नुभएन । गाउँ नजिकैको सामुदायिक वन पाल्न थालेपछि जंगली जनावरको विगविगी बढ्न थालेको उहाँले बताउनुभयो ।
नगर प्रमुख कुलबहादुर कुँवरले जँगली जनावरले पारेको समस्याका बारेमा आफू कहाँ धेरै गुनासो आउने गरेको बताउनुभयो । यहाँका स्थानीय कृषक जँगली जनावरबाट निकै पीडित बनेका छन् । “म कहाँ धेरै गुनासो आएको छ कुवँरले भन्नुभयो सिँचाइको अभाव, जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पादनमा कमी, परम्परागत कृषि प्रणाली र बसाइँसराइका कारण पनि खेतीयोग्य जमिन बाझै रहेका छन् त्यसमाथि बँदेल बाँदरको आतंकले थप समस्या सिर्जना गरेको छ । रासस
प्रकाशित मिति : 2018-03-20
बर्खायाममा पानीजन्य रोगको जोखिम, पानी उमालेर तथा शुद्धीकरण गरेर प्रयोग गर्न चिकित्सकको सुझाव
काठमाडौं, १० वैशाख । । बर्खा लागेसँगै पानीजन्य रोगको जोखिम बढ्ने गरेको छ । पानीका मुहानमा वर्षाको समय जनावरका मलमूत्र...
राजविराज, १० वैशाख । सप्तरीको छुट्टाछुट्टै ठाउँमा आज आगलागी हँुदा करीब रु २० लाखको क्षति भएको छ । जिल्लाको सुरुङ्गा...
भूकम्पपीडितको अनुदान एकमुष्ट उपलब्ध गराउनुपर्छः बाबुराम भट्टराई
काठमाडौं, १० वैशाख । नया शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अनुदान रकम एकमुष्ट रुपमा...
बंगलादेशको राजधानी ढाकाबाट काठमाडौंका लागि दुई वटा बस छुट्यो
कर्मचारीले मागे आवासदेखि खाजासम्मको माग, मुख्यमन्त्रीलाई बुझाए ज्ञापन पत्र
५० हजार घुससहित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सहायक प्रबन्धक पक्राउ
पशुपतिबाट ४० वर्षपछि वाग्मती यात्रा शुरु
आलेख : विदेशबाट घर फर्किंदा न सम्पत्ति न श्रीमती
दुर्घटनाबाट क्षतिग्रस्त विमान हटाइएन
चाम्लिङ दोबालिछा समाजद्वारा समाजसेवी राई सम्मानित
साढे ३३ किलो सुन काण्डमा पुर्व डिआइजी पक्राउ : मृत्यु भएका तीन अाराेपिकाे हत्या भएकाे अाश‌ंका
जुवाखालबाट सातजना पक्राउ
टेम्पो चलाएरै मासिक ५० हजार कमाइ
प्रदेश ४ को नामाकरणका विषयमा फरक फरक मत
राजाको शासनमा भारतलाई रिझाउनकै लागि यस्तो सम्झौता